MADAXWEYNAHA JABUUTI OO KA HADALI DOONA LABADA AQAL EE BAARLAMANKA ITOOBIYA oo laga yaabo in uu mar kale ku dhawaaqo waxaan ahay Wiilki Diredhaba. – Xeernews24
MADAXWEYNAHA JABUUTI OO KA HADALI DOONA LABADA AQAL EE BAARLAMANKA ITOOBIYA oo laga yaabo in uu mar kale ku dhawaaqo waxaan ahay Wiilki Diredhaba.
Ra’isulwasaaraha Itoobiya ayaa lagu wadaa in uu warbixin dheer oo ku saabsan xaalada dalka ka jeediyo labada aqal ee baarlamaanka Itoobiya. Shirka baarlamaanka oo ah mid caadi ah ayaa qabsoomaya 16-ka bishan oo ku beegan Khamiista.
Sidoo kale, waxaa shirka khudbad ka soo jeedin doona madaxweynaha Jabuuti, Cumar Geele, oo booqasho ku soo gaadhaya Itoobiya.
Warbixinta Hailemaraim ayaa laga yaaba in lagu soo daro qodobo la xidhiidha xaalada degdega ah iyo saameynta ay dalka ku reebtay, abaaraha wadanka ka jira iyo kaalmada dawlada iyo xaaladaha wadamada dariska ah, gaar ahaan Soomaaliya iyo K Suudan.
Xubnaha baarlamaanka ayaa inta badan fursad u hela inay ra’isulwasaaraha weydiiyaan su’aalo la xidhiidha xaalada dalku uu marayo.
Masuuliyiinta EPRDF ayaa inta badan aad u buunbuuniya horumarka uu dalku ka sameeye dhanka dhaqaalaha iyo dhismaha, balse waxa ay daboolaan dhibooyinka wadanka ka jira sida shaqo la’aanta, kacdoonka shacabka, khilaafka xisbiga u dhaxeeya iyo xurgufta ka jirta xuduudaha qoomiyadaha qaarkood, gaar ahaan ismaamulka Soomaalida iyo Oromada oo dagaalo waayadan ka socdeen.
Hailemarim ayaa qudbadiisa jeedin doona galinka hore, halka Cumar Geele oo labada aqal la hadali doono galinka dambe.
Waxaase marna rajo laga qabin in madaxweyne Geele kala hadlo wax ay dani ugu jirto dawlada Djibouti iyo shacabka reer Sitti ee ku nool bahdilaad iyo cadaalad daro aan waligeed soo marin taarridkdooda taas oo uu sababteeda leeyahay maamulka Tigreega tirada yar ee ka taliya dalka Ethiopia.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/Geele-iyo-desaleygn.png 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-14 09:14:492017-03-14 09:14:49MADAXWEYNAHA JABUUTI OO KA HADALI DOONA LABADA AQAL EE BAARLAMANKA ITOOBIYA oo laga yaabo in uu mar kale ku dhawaaqo waxaan ahay Wiilki Diredhaba.
Wararkii ugu dambeeyay Arrimaha Golaha Wasiirada iyo Shaxda Wasiirada maamulada... Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Britain oo saaka socdaal lama filaan ah ku yimid...